धादिङ जिल्लाको सुनैलाबजार गाँउ विकास समितिको वडा नं १ मा जन्मिएर वडा नं ७ तल्लोवेशीमा वसोवास गर्दै आउनु भएका रामनाथ अधिकारी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापती हुनुहुन्छ । २०१८ सालमा बाबु शिबनाथ अधिकारी र आमा टीकादेवीको कोखवाट जन्मनु भएका अधिकारीले २०३६ साल देखि सकि्रय र २०३८ सालदेखि जिल्ला अदालतको नोकरी छाडेर पुर्णकालिन राजनीतिक जीवनमा लाग्नु भएको हो । धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधी सभाका सदस्य समेत निर्वाचित हुनु भएको अधिकारी कांग्रेस भित्रका शालीन र मिलनसार नेताको रुपमा चिनिनु हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न गाँउ क्षेत्र र जिल्ला अधिवेसनको सेरोफेरोमा रहेर सभापती अधिकारीसँग हामीले करुाकानी गरेका थियौं । प्रस्तुत छ नेपाली कांग्रेसका सभापती रामनाथ अधिकारीसँग यस साप्ताहिक कार्यकारी सम्पादक राजाराम शर्माले गर्नु भएको कुराकानी नेपाली कांग्रेसको आसनन्त जिल्ला अधिवेसनको तयारी कहा पुग्यो हामीले पार्टीको गाँउ क्षेत्र र जिल्ला अधिवेसनको सम्पुर्ण तयारी पूरा गरिसकेका छै । पार्टीको परिमार्जित विधान वमोजिम देशभरका सवै गाविसहरुमा एकैदिन अर्थात आज साउन ९ गते सवै क्षेत्रमा एकैदिन अर्थात साउन १५ गते र सवै जिल्लाहरुमा एकैदिन अर्थात साउन १७ गते अधिवेसन हुदैछ । यद्यपी जिल्ला अधिवेसन भने राष्टिय राजनीतिको प्रभावले स्थगित गरिएको छ । हामीले धादिङका ५० वटौ गाविसमा गाँउ अधिवेसनको तयारी पुरा गरिसकेका छौ । यसको लागी ५० जना शिक्षकहरुलाई मतदान अधिकारीको रुपमा परिचालित गरिसकेका छौ । तपाई २०५४ सालदेखि कांग्रेस धादिङको सभापती हुनुहुन्छ । अझै पार्टी नेतृत्वमा रहने सोच वनाउनु भएको छ अवस्य पनि मैले २०५४ सालदेखि पार्टी नेतृत्व सम्हाल्दै आएको छु । तर नर्वाचित भएर भने २०५८ साल देखि पार्टी सभापतीको जिम्मेवारी वहन गरेको छु । यो अबधिमा धेरै साथिहरुले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरिसक्नु भएको छ । पार्टी नेतृत्व सम्हाल्न धेरै साथिहरु ईच्छुक रहेका पनि मैले पाएको छु । त्यस कारण जिम्मेवारी बाँडफाड गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु । पार्टीका जिम्मेवार साथीहरुमा दैनिक जसो छलफल सरसल्लाह भैरहेको छ । सवैको सहमती र एकतामा नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । अर्को कुरा एउटा पदमा धेरै साथीहरुले ईच्छा राख्नु भयो भने त्यस
२०१८ साल असार २२ गते स्व. पिता प्रमुख सेनानी तेजप्रताप सिं कार्की र स्व. माता गंगाकुमारी कार्कीको कोखवाट तेश्रो सन्तानको रुपमा जन्मेकी अम्भुभवानी कार्की शिक्षा क्षेत्रमा लामो विताईसकेकी अनुभवी, वुद्धिजीवि र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत भूमिगतकालदेखि कृयाशिल रहेर विभिन्न पदमा काम गरेकी साहसिली महिला हुन् ।